Photos: Hurricane vs. Point Pleasant, girls basketball | Multimedia | herald-dispatch.com
Photos: Hurricane vs. Point Pleasant, girls basketball
Hurricane takes on Point Pleasant in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Haruka Yamagucci (15) drives baseline against Point Pleasant's Lanea Cochran (23) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Callen Bostic (32) puts up a shot past Point Pleasant's Morgan Miller (11) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Brooke Lucas (10) defends against Point Pleasant's Peyton Campbell (00) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Callen Bostic (32) dribbles up the floor against Point Pleasant's Allison Henderson (10) during a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Point Pleasant's Peyton Campbell (00) puts up a shot against Hurricane's Brooke Lucas (10) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Point Pleasant's Lanea Cochran (23) grabs a rebound over Hurricane's Maddie Pifer (5) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Point Pleasant's Peyton Campbell (00) dribbles up the floor against Hurricane's Brooke Lucas (10) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Players dive on a loose ball as Hurricane takes on Point Pleasant in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Maddie Pifer (5) and Point Pleasant's Lanea Cochran (23) battle for a position on a rebound attempt in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Sarah Westfall (11) dribbles up the floor against Point Pleasant's Allison Henderson (10) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Callen Bostic (32) makes a throw as the Redskins take on Point Pleasant during a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Brooke Lucas (10) drives to the basket against Point Pleasant's Morgan Miller (11) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Maddie Pifer (5) looks to make a pass as the Redskins take on Point Pleasant in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Point Pleasant's Allison Henderson dribbles up the floor against Hurricane in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Callen Bostic (32) puts up a shot on Point Pleasant's Allison Henderson (10) during a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane takes on Point Pleasant in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Callen Bostic (32) looks to shoot as the Redskins take on Point Pleasant during a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Sholten Singer/The Herald-Dispatch Hurricane's Brooke Lucas (10) attempts to get past Point Pleasant's Hannah Smith (32) in a high school girls basketball game on Wednesday, Jan. 18, 2017, at Hurricane High School.
Hurricane girls beat Point Pleasant for first win
HURRICANE - The Hurricane High girls basketball team got to do something Wednesday night it hasn't done in what's been a long season.